LEDbow 50W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း
ပုံစံ LEDbow စမတ်လမ်းအလင်း
အရွယ် 821mm x 346mm
package အသေးစိတ် 821mm x 346mm(W x H)
PC ကွန်ပျူတာ / APP ကိုစမတ်ပလက်ဖောင်းထိန်းချုပ်မှု
ကွဲပြားခြားနားသောလျှောက်လွှာ / အရပ်ဌာနရောင်ခြည်ညှိနှိုင်းမှု
ပိုပြီးစွမ်းအင်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်
မေး2. Can I haveasample order for Integrated Smart လမ်းမီး ?
မေး3:Can you တစ်ဦးအယူအဆသို့မဟုတ်ပုံဆွဲသည်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေး?
မေး4. How to proceed an order for Smart လမ်းမီး ?
မေး5: Do you offer guarantee for the products?
LEDbow 60W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း
LEDbow 40W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း
LEDbow 30W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း
LEDbow 20W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း
LEDbow 15W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း